विलुप्त विद्रोह सशुल्क कार्यकर्ताहरूको एक समूह: मार्टिन Vrijland
विलुप्त विद्रोह सशुल्क कार्यकर्ताहरूको एक समूह
मा दायर विलुप्त विद्रोह, समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	8 अक्टोबर 2019 मा	• 1 टिप्पणी
ओह राम्रो छ, तपाइँ कसैलाई भन्नु पर्दैन जो मिडिया र राजनैतिक खेलहरूमा थोरै अडीयो। विलुप्त हुने विद्रोहको प्रदर्शन, जसको लागि कुनै लाइसेन्स बिल्कुल जारी गरिएको छैन, मिडियाका क्यामेरा चालकहरूले राम्ररी पराजित गरेका छन् र गिरफ्तारीहरू क्यामेरा शो बाहेक अरु केही छैन। यो शाब्दिक मुट्ठी भर मान्छेको जस्तो सामान्य (थोरै फेसनल) हिप्पी लुक हो, जसले आफ्नो जीवनमा पहिलो पटक पाल बसाल्नको लागि थोरै पैसा कमाउन सक्दछन् र जसलाई उनीहरूले के कुरा गरिरहेछन् थाहा छैन।
ब्रोडकास्टर पॉवनेडले केहि क्रेडिटहरू पनि स्पष्ट रूपमा देखाउँदछ कि ती युवाहरूलाई थाहा छैन कि CO2 कार्बन डाइअक्साइडको संक्षिप्त नाम हो, जबकि हामी अहिले यहाँ लगातार प्रमाण साइटमा हेरेको छ कि त्यस्ता प्रदर्शनहरू, दंगा र पक्राउ सहित, पूर्णतया दिशातिर छन् र उही PowNed ले पिटेको छ। तर आलु-इन-घाँटी नहर बेल्टको तैनातीको साथ (र त्यसैले 'सही' थियरी बाउडेट छवि) रिपोर्टरले तपाइँ कार्यकर्ताहरूलाई पीडित भूमिकामा धकेल्छ र इतिहासले देखायो कि तपाइँले शिकार स्थिति दिनुहुने सबै कुरा अन्तत: अलाभनीय स्थिति प्राप्त गर्दछ।
आइतवार 10 अप्रिल 2016 म साथीको साथ हेग गएँ एक पेगिडा प्रदर्शनमा व्यक्तिगत हेराई लिन र मिडियाले रेखांकित गरेको छवि वास्तविकतासँग मेल खान्छ कि भनेर हेर्न। हामीले चाँडै बुझ्यौं कि यो वास्तवमा त्यस्तो होइन। हामीले आफ्नै आँखाले देख्यौं कि त्यस्तो प्रदर्शनले मिडियाले पूर्ण रुपमा कुटेको छ र गिरफ्तार सहित प्रदर्शन र काउन्टर प्रदर्शन पूर्ण रुपमा दृश्यमा स्थापित भएको छ।
दिन राम्रोसँग सुरु भयो, जब हामीले दिउँसो आधा 1 वरिपरि कफीको कप पियौं र मैले स्पुइ वर्गको पछाडि बारमा पछाडिबाट चित्रण गर्न शुरू गरें। तुरुन्तै दुई एजेन्टहरू हाम्रो आईडी कार्डको लागि सोध्न आए। वास्तवमा, यो सकिए कि तिनीहरूले वास्तवमै सबै यात्री-द्वारा यो गरेका थिए। प्रदर्शनकर्ताहरूको समूहको तुलनामा उपस्थित पुलिसको संख्या अत्यन्त ठूलो थियो। मेरो अनुमान छ कि त्यहाँ 500 प्रदर्शनकारीहरुमा 50 एजेन्टहरू थिए। यो मुख्यधारको मिडियामा सन्देशहरूको विपरित हो, जसले यस्तो दावा गरेको छ कि त्यहाँ त्यस्तो छ 100 प्रदर्शनकर्ताहरू थिए। त्यो जस्तो लाग्न सक्छ, किनभने 1 वरिपरि प्रदर्शनकारीहरू 1 पत्रकारहरू, फोटोग्राफरहरू वा क्यामेरामा हिडे। यो वास्तवमा एक दु: खी कार्यक्रम थियो। मतदान मुश्किल उल्लेखनीय थियो। समान एन्टीफाको तथाकथित काउन्टर-प्रदर्शनमा लागू गरियो।
प्रदर्शन हुनु अघि पनि, एक पक्राउ नक्कली बनाउने प्रयास गरिएको थियो किनभने ME 'नीलो बाहिर' पेशेवर कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो फ्रैंक वान डेर लिन्डे पक्राऊ। यो पहिले नै सहमत भएको जस्तो देखिन्थ्यो, किनकि सबै क्यामेरा र फोटोग्राफरहरूलाई ठीक त्यो क्षण थाहा थियो र फोटोहरू लिन तयार थिए। फ्रान्कले आफूलाई एक पेशेवर कार्यकर्ता भन्छन् भनेर यो कुनै पनि कुराको लागि होईन, किनकि यो वास्तवमा पूर्वाभ्यास गरिएको काम जस्तो देखिन्थ्यो। जे होस्, यति व्यावसायिक होइन कि यस पटक वैकल्पिक मिडियालाई ध्यानमा राखिएको थियो। के भयो? भ्यान डेर लिन्डे भ्यान पछाडि समातिएन, तर क्यामेराको अगाडि "अत्यन्त आक्रामक" भएको महान् व्यक्तिहरूसँग मात्र केही मिनेट कुरा गर्दै थिए। पर्दा! (लेखको तल भिडियो छविहरू हेर्नुहोस्)
प्रदर्शनमा आफैंमा एक सेट अप कार्यक्रम का सबै तत्वहरु पनि थिए। एक पुलिस हेलिकप्टरले कार्य पूरा गर्‍यो। देखिएको क्यामेराम्यानसँगै उपस्थित थियो: एक गोरा जसले केवल भियर्डो प्रकारहरू र निर्देशकसँग सम्पर्क गर्‍यो। थप रूपमा, तपाईसँग NOS, Telegraaf, Omroep West बाट टोली थियो र तपाई त्यो खराब कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। यस्तो मिनेट प्रदर्शनको साथ सम्पूर्ण मिडिया देशले के गर्नुपर्छ? उत्तर पहिल्यै अनुमान गर्न सकिन्छ। यस्तो देखिनुपर्दछ कि जनसंख्या समूहहरूलाई एक अर्काको विरुद्ध उक्साएर ठूलो सफलता हासिल भइरहेको छ। केहि कम सत्य छैन। टर्नआउटमा मुट्ठीभर भाडामा लिइएको एक्स्ट्रा भन्दा बाहेक अरू केही समावेश थिएन, जसरी हामी हाल विलुप्ति विद्रोहमा देखिरहेका छौं। होईन, मैले भुक्तान जाँच देखेको छैन जुन प्रमाणित गर्दछ कि तिनीहरूले काममा लिएका छन्, तर यो एक धेरै रंगीन कम्पनीबाहेक अरू केही थिएन कि सही पेगीडा टोलीले ठीक समयमा उनीहरूको हातमा सही ब्यानरहरू र संकेतहरू पाए र तिनीहरूलाई अगाडि राख्यो। क्यामेरा पोज गर्न। सबै क्यामेरा र शट वरिपरि घुमायो। र PowNed को पाठ्यक्रम यी सबै मूर्ख खोज अतिरिक्त साक्षात्कार।
एक खास बिन्दुमा मैले रातो कपाल भएको महिलासंग पाभनेडले गरेको अन्तर्वार्ता सुन्दै थिएँ। पछि सोधिने बित्तिकै, उनी बाहिरकी छिन् र उनको आफ्नै ब्लग छ भनेर थाहा भयो, र उनले पुलिस अधिकारीहरू बीचको कुराकानीबाट केहि सिकेकी थिइन। उनले सुनेकी थिइन कि त्यहाँ बर्गरकि inमा एक 25 काउन्टर-प्रदर्शनकारीहरू थिए जुन पेगीडा प्रदर्शनकारी-एक्स्ट्रामा आक्रमण गर्न तयार थियो। तलको भिडियो हेर्नुहोस्। खैर, यदि तपाइँ पृष्ठभूमिमा आवाज सुन्नुहुन्छ भने, यो प्रभावशाली भाषणहरू दिइरहेको जस्तो देखिन्छ। ती4व्यक्तिहरूबाहेक अरू केही थिएनन्, जसमा पेगिडा नेदरल्याण्ड्सका फोरमैन एडविन वेगेन्स्वेल्ड र केही व्यक्ति जो प्रत्येकले चर्को स्वरमा नोट पढेका थिए।
मैले प्रदर्शन अघि अघि हिंड्ने निर्णय गरें र रातो कपाल भएको महिलाले उल्लेख गरेको बर्गरकिंगमा हेर्नुहोस्। र हो, तिनीहरू त्यहाँ थिए: एन्टीफाको काउन्टर-प्रदर्शनकारीहरू। म उनीहरूलाई प्रोटेस्टेन्ट - अतिरिक्त भन्छु किनभने यो सबै कार्यको बारेमा थियो। खेलाइएको आक्रमणको क्रममा पनि, यो समूहका धेरै सदस्यहरूले उनीहरूको अनुहारमा हँसाई मुस्कान राखेका थिए जसबाट तपाईंले याद गर्नुहुनेछ कि उनीहरू खेलिरहेका थिए। यो स्पष्ट थियो कि सम्पूर्ण एन्टिफा क्लब बरगरकिंगमा राखिएको थियो कि दृश्यहरू मा पक्राउहरु सेट गर्न सक्षम हुन। किनकि किन तपाईं बर्गरकिंगमा एउटा समूह राख्नुहुन्छ जब सम्म पेगीडा प्रदर्शन पास हुँदैन र तिनीहरूलाई पूरै टीमहरूको अगाडि बर्गरकिंगबाट बाहिर जान दिनुहुन्छ र तिनीहरूलाई2सेकेन्डमै पक्राउ गर्नुहुन्छ? पक्कै पनि तपाईं त्यो पहिले गर्न सक्नुहुन्थ्यो? तिनीहरू केवल आफ्नो कार्यको लागि तयार थिए। पक्राउहरू क्यामेराको अगाडि एउटा प्रदर्शन मात्र हो। फेला पर्यो!
यो प्रदर्शन देख्न धेरै रोचक थियो ME द्वारा पूर्ण encapsulated सहरमा पैदल हिँड्यो र कसरी "" मात्र उस्तै नाराको नारा बाहेक केही होइन "AZC यसबाट टाढा छ!"यहाँ पनि यो कुरा स्पष्ट थियो कि शहरभरको यो पैदल यात्रा एक प्रदर्शन भन्दा बढि केही थिएन; बर्गरकिंगमा सानो उथलपुथल आयोजना गर्ने क्यामेरा चालकहरू र फोटोग्राफरहरूको लागि प्रस्तुत गर्न। मिडियामा एन्टिफामा रिपोर्ट गरिएको 54 पक्राउहरू अत्यन्तै बढाइचढाइ गरिएको थियो। यसबाहेक, तिनीहरू वास्तविक प्रदर्शन थिएनन्। बर्गरकिंगको ढोका उही अफसरहरूले खोलेको थियो जसले गिरफ्तार पछाडि2सेकेन्डको कार्य गर्‍यो। बर्गरकि inमा कति थप अतिरिक्तहरू छन् भनेर तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ। खैर, त्यहाँ बर्गरकिंगमा कुनै कर्मचारी थिएन, त्यसैले ठाउँको लागि स्पष्ट रूपमा भाडामा लिइएको थियो।
हेगमा प्रदर्शनको भ्रमणको कारण तपाईंको आफ्नै आँखाले अनुभव गर्नु थियो कि यस्ता प्रदर्शनहरू कसरी स्थापना हुन्छन् र यसले कसरी ठोस रूपमा कार्य गर्दछ। मा 2013 मैले हेरें सबै प्रदर्शन पूर्ण रूपमा समाधान गरिएको छ कि। अब यो स्पष्ट हुन सक्छ कि यो निष्कर्ष सही छ।
यदि तपाइँ फेरि प्रदर्शन गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, जान्नुहोस् कि सबै कुरा राज्यको नियन्त्रणमा छ। ओ हो, र पुलिस क्यामेरा कार उपस्थित छ (फोटो शृंखलामा सेतो बस हेर्नुहोस्) बस वरिपरि दर्जनौं क्यामेराले सुसज्जित थियो र दुई प्रभावशाली घुम्ने क्यामेरा जुन सबै कुरा फिल्म गर्दछ र सम्भवतः पहिले नै तपाईंको अनुहार दर्ता गरिएको छ यदि तपाईं अलि अलि गर्दै हुनुहुन्छ भने। नजिकको क्षेत्र। त्यसोभए हामी 100% का साथ निश्चितसँग भन्न सक्छौं कि प्रदर्शनहरू प्रदर्शन भइरहेको छ। सबै कुरा पुलिस राज्य द्वारा नियन्त्रित छ। त्यसोभए के हामी वास्तवमै सोच्छौं कि विश्वव्यापी विद्रोहको प्रदर्शनको पछाडि कुनै संगठन छैन? पछाडि त्यहाँ पछाडि संगठन छ! यो बायाँ बल क्षेत्र हो जुन जर्ज सोरोस द्वारा दायाँ द्वारा अनुदान प्राप्त गरिएको छ भनिन्छ (हेर्नुहोस्) यहाँ), तर अन्त्यमा दुबै बायाँ र दायाँ उही एलिस्टिस्ट समूहद्वारा व्यवस्थित गरिएका छन् र ब्रान्ड दायाँ तिर उडाइनेछ (हेर्नुहोस्। यो लेख विस्तृत विवरणको लागि), ताकि विश्व सरकारको रोडम्यापलाई 'जलवायु परिवर्तन' को साथ एक महत्वपूर्ण बहानाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकीन्छ। Trumanshow!
स्रोत लिङ्क सूची: nu.nl, notalotofpeopleknowthat.wordpress.com
पेरिसमा कसले पहेंलो रंगको भित्ता भंग गर्नेहरू छन्? भिडियो प्रमाण घुसाउनुहोस्
यूरोपमा मलेसिया र टाढाको राजनैतिक नेताहरूको कमी
झूटा झण्डा आतंकवादीहरूले 23 र 24 अक्टुबरमा लन्डन, म्यानचेस्टर, पेरिस, बार्सिलोना र रोटरडमलाई आक्रमण गर्छन्? (अद्यावधिक)
बारमा नगरपालिकाको चुनावमा चुनावको बहाना साबुन: थियरी बाउडेट र भाप मा अन्य अभिनेताहरू
ट्याग: एम्स्टर्डम, प्रदर्शन, विलुप्त विद्रोह, विशेष, जाँच गरियो, अनुदान, जर्ज, विरोध, Soros, शहरहरू, संसार
9 अक्टोबर 2019 मा 16: 30
स्ली फेमिमे हलसेमाले थिएटर क्याबिनेटमा धेरै कुरा सिकेकी छिन्। आज लिंकमा लिंक हेर्नुहोस्
प्रोटेस्टेन्टहरूले तथाकथित प्रोटेस्टेन्टहरुलाई पुलिस र ME द्वारा संरक्षण गर्दछ, जसले उनीहरुलाई घुमाउनबाट रोके।
कुशलतापूर्वक त्यो खेल खेल्नुभयो। र उही समयमा टाइमरम्यानसलाई जलवायु पोप कल गर्नुहोस्,
यो सबै अझ बढी पारदर्शी हुन सक्छ, सामाजिक शिक्षकहरूको लागि खाना।
मैले सुनेको पनि कि (नक्कली) प्रदर्शनकारीहरू बीचका युवाहरू पनि थिए
विदेशमा कमान्ड प्रशिक्षणको आनन्द लिनेहरू, यो सत्य हुँदैन र?
95% (नक्कली) प्रदर्शनकारीहरू विदेशी मूलका थिए।
ओह किन त्यसो ??? उत्तर: "त्यसोभए तिनीहरू यत्ति चाँडो पहिचान भएन"
« ब्रान्ड 'सही' र कलंकको सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध मार्केटिंग रणनीति
टर्कीको आक्रामक सिरिया युरोपको लागि बन्दरगाह »
कुल भ्रमण: 52.182
रसियाली बमवर्षकहरूले सिरियामा टर्कीको बख्तरबन्द गाडीहरू नष्ट गरे, अवस्था तीब्र भयो
मार्टिन भिजल्याण्ड op किन मूल ब्रह्माण्ड तपाईंको वास्तविक घर हो
Simsalabim op किन मूल ब्रह्माण्ड तपाईंको वास्तविक घर हो
मार्टिन भिजल्याण्ड op के ब्रिडेट मासल्याण्डले मार्टिन भ्रिजल्याण्डलाई धोका दिईरहेकोले एन्ड्री हेज भ break्ग भयो?
ellie op के ब्रिडेट मासल्याण्डले मार्टिन भ्रिजल्याण्डलाई धोका दिईरहेकोले एन्ड्री हेज भ break्ग भयो?
क्यामेरा2op विलुप्त हुने विद्रोह र उच्च करहरूको लागि कल र तपाईंको जीवनको प्रत्येक विवरणमा पूर्ण नियन्त्रण